I-HUGE 2 Bedroom Apartment Beach Front (Ukubuka Kwedolobha) - I-Airbnb
I-HUGE 2 Bedroom Apartment Beach Front (Ukubuka Kwedolobha)
Abu Dhabi, i-United Arab Emirates
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Esperanza
Ifulethi eliyisisekelo nelingenazo izinto ezithokozisayo embhoshongweni owakhiwe kahle, ngaphesheya komgwaqo ukuya ogwini nokupaka. Kukhona i-Jones the Grocer esitezi esiphansi kanye neklabhu yasolwandle ngaphesheya komgwaqo (uhambo lwamaminithi angu-2) Lena indawo engcono kakhulu yokuhlola i-Abu Dhabi. Zonke izinto ezikhangayo ezinkulu zingafinyelelwa kungakapheli imizuzu eyi-15 - 25, okuhlanganisa iGrand Mosque, Louvre, Ferrari World, YAS Island, Formula 1, Marina Mall. Ukuhambela ibhizinisi indawo yami ingaphakathi kwemizuzu engu-5 ye-Etihad Towers, ADNOC nezinye eziningi.
Ifulethi lonke ingeyakho, futhi isekelwe embhoshongweni omi kahle. Asikushayeli ucingo kuphela uma usidinga. Uzoba sezandleni eziphephile zethimba lami elizohlangana nawe endaweni futhi likubonise eduze ukuze uzuze kukho konke elikunikezayo.
Ukukhipha isikhwama kuyatholakala ngaphambi kokungena.
Singakwazi ukungena kusukela ngo-9pm - nasebusuku.
Uyophuma ngo-11 ekuseni
Ifulethi lethu elihle elinamakamelo ama-2 litholakala esitezi sesi-2. Ubingelelwe yi-concierge njengoba ungena, okunye ukuzijabulisa kufaka phakathi ukufinyelela kwamahhala endaweni yokuzivocavoca kanye nedamu lokubhukuda.
Inepulani elivulekile lokudlela/igumbi lokuhlala eligcwele i-Wi-Fi ne-TV. Ikhishi ligcwele zonke izinto ozidingayo ukuze wenze ukudla. Kukhona iwasha/i-dryer nayo efakiwe ezofika ibe wusizo kuwe, ngiyaqiniseka.
Ifulethi lilingana abantu abangu-6 ngokunethezeka, sizokushiya ulwela ukuthi ubani onamuphi umbhede;
I-Master Bed ene-en-suite - umbhede we-Queen
I-Sitting Room - Umbhede kasofa oyedwa
Kunendawo yokupaka izimoto engaphansi komhlaba yamahhala yamahhala, kuyilapho amakhefi (i-Costa Coffee, uJones the Grocer esakhiweni kanye ne-Starbucks) kungakapheli iminithi lokuhamba ngezinyawo. Izitolo ezahlukahlukene zingaphandle ngqo nesuphamakethe kanye nesitolo esiseduze esingaphansi kohambo lwemizuzu engu-1 kanye nezinye izitolo eziwusizo. Izithuthi zomphakathi eziseduze zitholakala kuhambo olufushane nje lwemizuzu emi-2, kuyilapho kunendawo yokubhucungwa kanye ne-spa esizeni futhi kukhona nepaki ngemuva kwesakhiwo elilungele imindeni.
Ukuhamba kancane nje uzothola i-Corniche lapho kunobhishi lomphakathi kanye namapaki, izindawo zokugijima kanye nezindawo zokuqina.
Kungani sithanda leli fulethi?
I-specious yayo, kanye nendawo yokuzivocavoca kanye nephuli yengeza izinzuzo zangempela
Ibhishi liseduze kakhulu
Inani elikhulu, sicabanga
Kungani izivakashi zethu zikuthanda, futhi lokhu kuvela kubo..........
'Iseduze nakho konke'
'Empeleni kukhona umuntu ozohlangana nawe futhi akutshele yonke into mayelana nefulethi, okwenze kwaba lula kakhulu'.
Sicela uqaphele ukuthi ezinye izakhiwo nefenisha ezithombeni zingahluka ngemibala.
Ifulethi lisembhoshongweni osungulwe, ngokoqobo ngaphesheya komgwaqo ukuya ogwini nokupaka. Kukhona i-Jones the Grocer esitezi esiphansi kanye neklabhu yasolwandle ngaphesheya komgwaqo (uhambo lwamaminithi angu-2) Lena indawo engcono kakhulu yokuhlola i-Abu Dhabi. Zonke izinto ezikhangayo ezinkulu zingafinyelelwa kungakapheli imizuzu eyi-15 - 25, okuhlanganisa iGrand Mosque, Louvre, Ferrari World, YAS Island, Formula 1, Marina Mall. Ukuhambela ibhizinisi indawo yami ingaphakathi kwemizuzu engu-5 ye-Etihad Towers, ADNOC nezinye eziningi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Abu Dhabi namaphethelo